Myanmar: RFA discussion on voters list & election education Uploaded by Myo.Htike.Tan.Thein at Your Listen
Myanmar: RFA discussion on voters list & election education
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."၂ဝ၁၅ ရွေးကောက် ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - Myanmar: RFA discussion on voters list & election education
Tags: myanmarburmaburmeseelectionvoter registration listelection watchelection monitoringelectionsmyo yan naung theinnational league for democracy (nld)daw aung san suu kyi
၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်သင့်သလဲ?
စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ဘယ်လို ဆွဲဆောင်သင့်ကြတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို ရန်ကုန်မြို့က ဗေဒါလူငယ်သင်တန်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးမျိုးရန်နောင်သိန်း၊ NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များရုံး တာဝန်ခံ ဦးနေမိုးအောင်နဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ကွန်ရက် ညှိနှိုင်းရေးမှူး မသဉ္ဇာရွှန်းလဲ့ရည်တို့နဲ့အတူ ဦးခင်မောင်ညိန်းက ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ (RFA/Burmese)
Myanmar: Rfa Discussion On Elector… by Myo.Htike.Tan. ... 00:23:42 687
Myanmar: Rfa Discussion On 2015 El… by Myo.Htike.Tan. ... 00:23:06 880
Molana Swaleh Bodi(myanmar Bayaan-… by rangooni 00:49:10 2304